Akwukwo nri | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Akwukwo nri
Banyere uru na ụzọ nke isi nri ọka wit. Kedu nri ọka na-atọ ụtọ nke a pụrụ iji ọka mee, tinyere mkpọ?
Ọka bụ ọka si Mexico. Ụfọdụ ebo na-efe ya ma jiri obi ụtọ na-eme ihe ubi ya. Anyị nwere ọka a na-akpọ eze nwanyị nke ubi. Na nri, ọ bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị mma n'ihi na ya bara uru uru, mma ndakọrịta na ndị ọzọ na-emepụta, nutritional value and high digestibility.
Kedu oge na ole ole ka esi esi nri na pan pan nke dị na Bonduel?
Ugbua a na-ere ahịa nwere nnukwu mkpụrụ ọka. N'okpuru ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa, ị nwere ike ịhụ ihe niile obi gị chọrọ: corncobs dị iche iche ntozu okè na iche iche iche, mkpọ na ọka sie, yana ọtụtụ ngwaahịa ndị sitere na ọka ya.
Atụmatụ gardeners: Enwere m ike ịkwọ carrots tupu ịtọba nchekwa?
Carrots bụ otu n'ime akwụkwọ nri ndị kachasị mma na tebụl anyị. Ọ nwere ọtụtụ vitamin, mineral na antioxidants. Iji rite uru site na carrots, ọ bụghị naanị n'oge ọkọchị, kamakwa n'oge oyi, a na-echekwa ya maka nchekwa. Ịchekwa carrots n'oge oyi bụ ihe siri ike karịa akwụkwọ nri ndị ọzọ. Ya mere, chee echiche banyere taabụ tupu oge eruo, na oge opupu ihe ubi, mgbe ị na-ahọrọ mkpụrụ kwesịrị ekwesị maka akuku.
Ụzọ kachasị mma isi chekwaa carrots n'oge oyi na otu esi egwu na ịkwadebe akwụkwọ nri
Na oge oyi, ịchọrọ ime onwe gị obi ụtọ na nri dị ụtọ. Nri ụtọ karọt bụ ndị ma okenye ma ụmụaka hụrụ. Ihe oriri a na-egbuke egbuke bara ọgaranya na vitamin na mineral, na n'oge oyi, mgbe anụ ahụ anyị enweghị nri, iri nri carrots ọhụrụ agaghị abụ ihe dị ụtọ, kama ọ dịkwa mma. Gụkwuo otu esi echekwa carrots na isiokwu anyị.
Kedu etu ole esi esi kpocha ọka n'ime ihe na-esi nri: ndụmọdụ bara uru
Onye na-esi nri ọkụ bụ otu n'ime ngwa ngwa kichin kachasị mma nke ọ bụla dị mkpa. N'ihi ihe mkpuchi ya, a na-emewanye nrụgide, okpomọkụ dị n'ime dị elu. Ya mere, ị nwere ike esi nri ọtụtụ efere ọtụtụ ugboro ngwa ngwa. Ọtụtụ mgbe, ọ na-eme ka onye na-esi nri na-esi nri.
Ndepụta ụzọ dị irè iji chekwaa carrots maka oyi n'oge obibi, ma ọ bụrụ na ọ dịghị okpuru ulo
Carrots - bụ otu n'ime akwụkwọ nri ndị kasị ewu ewu, nke nwere nzube zuru ụwa ọnụ. Ị nwere ike iji ya na ụdị akwụkwọ mkpọ, yana echekwara na mmiri. Ọtụtụ mgbe, a na-echekwa akwụkwọ nri mgbọrọgwụ na okpuru ulo, ma ọ bụghị ụlọ nile na-enye ha. Nke a abụghị ihe mere ị ga-eji wepụ ihe owuwe ihe ubi ahụ, ebe ị nwere ike ịchekwa ọdịdị na nro ya site n'enyemaka nke ụzọ ndị ọzọ dị irè.
Esi esi esi nri na ole ọka ole?
Sicha ọka bu otu n'ime ihe uto nke umuaka na ndi okenye. Ma, ọ na-adọrọ mmasị karịsịa na ogbo nke njedebe dị egwu. Ihe a na-esi ísì uto ma dị ụtọ abụghị naanị mfe ịkwadebe, ma nwekwara ọtụtụ ihe bara uru dị mkpa maka ahụ. Na ka ndị cobs jidekwa ihe niile ha nwere, ọ dị mkpa ịmara otú e si ahọrọ ha n'ụzọ ziri ezi ma ole ka esi esi nri na saucepan.
Ọ ga-ekwe omume na otu esi edebe carrots na ubi ruo mgbe mmiri: nzọụkwụ-site-nzọụkwụ algorithm, ndụmọdụ na ịhọrọ ụdị dị iche iche
Carrots bụ mkpụrụ osisi ihe ọkụkụ na-adọrọ adọrọ na ọ bụghị dịka ihe siri ike na-eto eto dị ka ọ ga-esi chebe ya ruo mgbe mmiri. Usoro a nwalere oge iji chekwaa akwụkwọ nri ndị dị na ubi nwere ọtụtụ akụkụ dị iche iche. Kedu ihe bụ nkọwa nke nkà na ụzụ a? Anyị na-amụtakwu ihe n'isiokwu anyị. Akụkụ nke mgbọrọgwụ, dị mkpa maka nchekwa n'oge oyi Carrots na-esonye na ìgwè nke mgbọrọgwụ a kụrụ na anụ ahụ dị larịị (perel).
Ọnọdụ dị mkpa maka ịchekwa carrots: mkpa dị ogo, ọdịiche dị n'etiti iche na nuances ndị ọzọ
Karọt bụ ihe oriri ihe oriri nke bụ otu n'ime mmadụ ole na ole kwesịrị ekwesị maka nchekwa nchekwa oge. Iji mee nke a, ị nwere ike itinye usoro dịgasị iche iche, nke a chọpụtara site na ọchịchọ onwe onye nke onye bi n'oge okpomọkụ, ebe dịnụ na ọtụtụ ihe ọkụkụ dị iche iche. Ke adianade do, ọ dị mkpa ịmepụta ọnọdụ zuru ezu maka nchebe nke ngosi nke carrots, n'etiti nke usoro nchekwa okpomọkụ dị oke mkpa.
Ị maghị otú esi esi nri ọka ngwa ngwa na ngwa ndakwa nri na ngwugwu ahụ? Anyị ga-agwa gị!
Onye ọ bụla maara banyere mkpa ị na-eri ọtụtụ akwụkwọ nri dị ka o kwere mee. Ha bara ọgaranya na vitamin, eriri, na ihe nchọta. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ime n'enweghị anụ na anụmanụ na-eji atụmatụ dị mma maka nri ya, mgbe ahụ enweghi akwụkwọ nri na menu ga-eme ka ahụ dị njọ.
Ịkwadebe efere site na sweetcorn: ole ka esi esi nri na-enweghị nsogbu na uru?
Ọ bụ ndị mmadụ maara ọka dị ka puku afọ iri na isii, ọtụtụ mba na-ahụ ya n'anya, a na-agbakwunye ya n'ụdị nri dị iche iche ma rie ya. A na-eme ka ọka na-atọ ya ụtọ na ihe ndị dị mma, ya mere, n'oge okpomọkụ na n'akụkụ ọ bụla, ha amalite ere cobs, ọ siri ike iguzogide ịzụta ma ghara ịkụ ọka ọka.
Carrots na nchekwa maka oyi: otu esi egbutu ma kwadebe n'ụzọ kwesịrị ekwesị?
N'etiti ubi ndị ọzọ a kụrụ n'ubi, carrots na-apụta dịka ihe oriri nke siri ike iji chekwaa ruo ogologo oge. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe mere ị ga-eji na-eme ka ihe ọkụkụ na-adịghị mma: site na usoro ugbo na-ezighị ezi nke ịgha mkpụrụ ka iru elu na okpuru ulo. Mkpa nke akụrụngwa maka ọ bụla na nkà na ụzụ nke ịchekwa carrots - tupu pruned mkpụrụ ya.
Ha na-ata nri dịka ha kwesịrị ma ọ bụ esi esi ocha ọka maka ịkụ azụ na obere azụ: anyị na-ekerịta ihe nzuzo
Ọka - achọrọ azụ maka ịkụ azụ n'ọtụtụ dị iche iche. Ọ na-akọwa ọhụụ nke ọnụ ala, nnweta na arụmọrụ nke ederede. Ọka na-adọta ọtụtụ azụ ndị nwere nnukwu ojiji, isi ísì na uto. Maka nri na-eji ọka ọhụrụ ma ọ bụ fermented, mkpọ ma ọ bụ ọka artificial.
Sie ọka: olee otú kacha mma ịchekwa?
Ihe na-atọ ụtọ site na ọtụtụ nri mkpụrụ osisi - ọka - na-enweghị ihe mere a na-akpọ "eze nwaanyị nke ubi." Mkpụrụ osisi vitamin na ịnweta ya na uto magburu onwe ya na-eme ka nri nchịcha (nke a na-akpọkwa ọka) ọ bụghị nanị na a na-anabata anyị na tebụl anyị, kamakwa ụlọ nkwakọba ihe maka ahụ mmadụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe ndị bụ isi nke ọka ọṅụṅụ dị mma, ụzọ nke nkwadebe na nchekwa.
Otu esi edebe carrots n'ime ite na igbe maka oyi. Ndị na-akọ ubi na-ahụmahụ
Enwere karọt dị ọhụrụ na shelf n'oge oyi. Ọ bụ ya na-enye obere oge oyi menu na ọtụtụ uru barapụta ihe. A na-etinye ya na soups, salads, efere n'akụkụ na ọbụna gbakwunyere desserts ụtọ. Ọ bụrụ na ị nwere nhazi ala gị ma ọ bụ ịzụta nnukwu carrots tupu oge oyi n'ihi na ọ ka dị ọnụ ala, ọ dị mkpa ka ị mụta otu esi echekwa ya nke ọma.
Kedu ka esi esi esi nri ọka na Panasonic multicooker?
Ọka na-adabere n'ọkwá nke atọ na ọka wit na osikapa. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na ngwaahịa a bara ọgaranya na ngụkọta nke vitamin na mineral ndị dị mkpa maka ndụ zuru ezu. Ndị okenye na ụmụaka n'ụwa nile hụrụ ụdị nri a n'anya. Na mgbakwunye na uru dị ukwuu, ọka na-atọ ụtọ. Iji mee ka eze nwanyị nke ubi ghọọ efere ezinụlọ, ọ na-edozi ya nke ọma.
Iwu ndị dị mfe: mgbe ịmalite ịkụ ọka carrots na beets na otu esi echekwa ha n'oge oyi n'ime okpuru ulo?
Carrots na beets adịwo ogologo oge ma were ọnọdụ siri ike na tebụl anyị. Na-enweghị ha, ọ gaghị ekwe omume iche ma ọ bụ okpokoro na-eri nri na anụ a ma ama n'okpuru uwe aji, ma ọ bụ ụbọchị izu na bred beetro or vinaigrette. Ịgha mkpụrụ nke iwu bụ naanị ọkara agha ahụ. Nkera nke abụọ bụ ịchebe ihe niile ma dị mma ruo mgbe owuwe ihe ubi ọzọ.
Ebee na olee otu ị ga - esi chebe carrots maka oyi n'oge obibi n'ụlọ?
Carrots bụ ihe mgbọrọgwụ nke bara uru maka ọdịdị ya na ọtụtụ ihe bara uru. Enweghị ihe kpatara onye okpomọkụ nke ọ bụla na-ewe ọtụtụ ụra n'okpuru karọt - akwukwo nri bụ ihe na-adịghị mma maka ịkọ ihe, mana ọ na-esi ike na rotting na wilting na oyi. Idebe nchekwa carrots mgbe ụfọdụ na-esikarị ike karịa ịmalite ha.
Ihe niile gbasara esi echekwa ọka n'ụlọ maka oge oyi: ihe kachasị mma
Onye mbu mara nke mmadu na-eme otutu otutu afo gara aga, ma site na mgbe ahu ihe a aburula ihe di iche iche nke otutu ihe ndi ozo. Canning bụ otu n'ime nhọrọ nri kachasị mma maka ngwaahịa ahụ, ma taa, i nwere ike itinye ihe ole na ole n'ọdụ akụ nri gị. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya iji chekwaa ọka n'ụlọ maka oge oyi, anyị na-akọwa nri ntụ ọka kachasị mma.
Ka anyị gwa gị otu esi echebe carrots: yana nuances ndị ọzọ nke usoro ihe oriri
Carrots nwere ọtụtụ vitamin bara uru na ihe ndị na-emepụta ihe ma bụrụ ngwaahịa na-edozi na tebụl anyị. Ọ bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya maka ịnọgide na-enwe ezi ahụ ike maka ndị okenye na ụmụaka. Ka carrots na-erite uru ọ bụghị naanị n'oge okpomọkụ, kamakwa n'oge oyi, ọ dị mkpa ịma ọnọdụ nke ịtọ na nchekwa. Nchekwa dị mma chọrọ ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri na ikuku ventilation.
Mkpụrụ vaịn nke American ọkwa "obi"
Otutu nke lihnisa
Ogologo oge ole ka ọ ga - ewe iji mee broccoli iji mee ka ọ dị mma na ahụike? Iwu nri na ntụziaka
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na orchid nwere isi ngbanwe, olu, ma ọ bụ n'akụkụ ndị ọzọ? Na-akpata, nhazi usoro na mgbochi
Ego ole ka ezì, ehi, ịnyịnya, ehi na-atụ: ụzọ dị irè iji chọpụta na enweghi akpịrịkpa
Anthurium na-ahapụ nkụ: ihe kpatara ihe ị ga-eme
Strawberry "Zenga Zengan": nkọwa na ịkụ
Akwukwo uzo ozo: iche, foto, nlekọta na mmeputakwa